Daawo:Xirsi oo Dhabar jabiyey Cabdiraxmaan Cirro,Muuse Biixi oo kala furfur ku haya Xisbiga Wadani iyo Doorashadii oo Maanta-Video | | Horufadhi Online
Daawo:Xirsi oo Dhabar jabiyey Cabdiraxmaan Cirro,Muuse Biixi oo kala furfur ku haya Xisbiga Wadani iyo Doorashadii oo Maanta-Video
Xirsi cali xaaji xasan oo kamid ahaa Xubnaha ugu sareeya Xisbiga wadani ee uu Hogaaminaayo Cabdiraxmaan Cirro ayaa Dhabarka u jeediyay Cabdiraxmaan cirro xili Xasaasi ah isagoo Xidhiidh hoose la yeeshay Muuse Biixi oo Afduub ahaan ku qaaday Doorashadii 13 Bishan Ka dhacday Deegaanka Maamulka Somaliland.
Xalay waxaa Warbaahinta la hadlay Cabdiraxmaan Cirro oo Sidii hadalkiisa ka Muuqatay Qaadacay Natiijada doorashada iyo Guud ahaan amuuraha la xidhiidha doorashada maamulkaasi galay 13 bishan.
Intaasi wixii ka danbeeyay waxaa xalay Saqdhexe ka daba hadlay Cabdiraxmaan Cirro Xirsi cali xaaji xasan oo gabi ahaanba daaha saaray hadaladii Cirro ku qaadacay Doorashada sheegayna in ka wadani ahaan ay ku Qanacsan yihiin Doorashadii 13 bishan dhacday.
Xogo hoose oo aanu helayno ayaa sheegaysa in qaab caadifaysan loo Tash kiiliyay Xirsi Islamarkaana Qoorweynta Habar-jeclo ay ku Dhiiri galinaso in uu noqdo Nin la jaal ah Muuse Bixi islamarkaana ka soo baxa Xayn Daabka Habar-yoonis iyo Xisbigooda iyadoo Xirsi loo adeegsanaayo ama lagu gubaabinaayo hadalo ka soo yeedhay Qoorwaynta Habar-yoonis oo ahaa kuwo Dhiilaysan.
Isku soo wada duubo oo waxaa jira xoggo kale oo iyana sheegaya in Muuse Biixi oo furfur xoogan ku wado Xisbiga Cabdiraxmaan Ciro isla markaana uu Siyaasiyiinta ugu waa weyn ku dhiiri galinayo in ay isaga soo baxaan Xisbigaas isla markaana ay guusha soo raacaan,waxayna wararku intaas ku darayaan in uu Muuse Biixi sameynayo Balan qaadyo hor dhac ah iyo in uu abaal marin doono Siyaasiyiinta kasoo baxa ama qaadaca hadalka Cabdiraxmaan Cirro.
Short URL: https://horufadhimedia.com/?p=53678
1 Comment for “Daawo:Xirsi oo Dhabar jabiyey Cabdiraxmaan Cirro,Muuse Biixi oo kala furfur ku haya Xisbiga Wadani iyo Doorashadii oo Maanta-Video”
Waar reer shiikh isxaaqoow, xoogaagiinaa yar ha iska kala tuurina. Adduunka meel doorasho xaq ahi ka dhacdo maba jidho, waa lays dhacaa. Haddii xisbiga Waddani tuhmayo ku shubasho, dariiqa u furani waa GARSOORKA. Maaha in dadka caadifad lagu kiciyo oo KHABIIL la isku laayo. Qofka muslinka dhiiggiisa maaha in lagu daadiyo siyaasado aan meel gaadhayn.Waxaa marka iska cad in reer isxaaq ay meel xun bahashu la marayso, waayo qabiil qaawan bay doorashada ku galeen.